Diiwaangelinta Meelaha Fudud ee Xaraashka leh ee Ceyniska Dukaanada leh Stereo Mics | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE
Home » News » Diiwaangelinta Meelaha Farshaxanka leh ee CEntrance Shieka oo leh Stereo Mics
Diiwaangelinta Meelaha Farshaxanka leh ee CEntrance Shieka oo leh Stereo Mics
MixerFace R4B waa xalka ugu sarreeya ee duubista xalka loogu talagalay Warbaahinta Broadcasting
Chicago, IL - November 5, 2019 - Qarniga waxay ku dhawaaqday in xalintooda xirfadeed ee duubista garoonka, the MixerFace R4B, waa markab. Muuqaalka duubista mobilada ee la amaani karo waxaa la socda labo ka mid ah mikrofooniyadaha XY stereo, PivotMics PM1, iyo duubista 24-bit ee duuba kaarka SD, abuuraya gabi ahaanba istaag keligiis ah, aalad duubis heer sare ah. Qalabka cusub ee 'MixerFace R4B' wuxuu hayaa dhamaan astaamaha waalidiinta moodooyinka MixerFace, oo ay ku jiraan batari dib loo isticmaali karo, guryo bir ah oo adag, maqal tayo sare leh oo telefishan, iyo istcimaal muuqaal ah oo adeegsada, dhammaantoodna waxay isku daraan si ay u abuuraan xalka mobilada ee ugu habboon ee baahinta fog ama isu imaatinka wararka. , maqal iyo muuqaallo.
Marka laga soo tago inay tahay xalka ugu dambeeya ee la qaadan karo ee loogu talagalay codsiyada Broadcast & Radio, MixerFace R4B sidoo kale waxay ku habboon tahay duubista goobta, riwaayadaha muusigga, dib-u-jimicsiga qulqulka, socodsiinta waxqabadka tooska ah, qabashada codka maqalka booska isku-qasan ee FOH xilliyada riwaayadaha, iyo waxyaabo kaloo badan.
Isku-darka MixerFace waa aalad aad u waadixsan, aalad la qaadan karo oo la qaadan karo, oo badanaa loo yaqaan “The Swiss Army mind of Audio”. Baytar gudaha ah, oo muddo dheer soconaya oo dib loo soo ceshan karo ayaa ka dhigaya qalabka kale ee codka la qaadan karo wuxuuna ka dhigayaa kan ku habboon wadada. Laba dhismo oo tayo sare leh oo heer sare ah oo leh awood heer sare ah ee 48V ayaa u oggolaanaya dadka isticmaala inay doortaan makarafoonadooda ay ugu jecel yihiin duubista, ama waxaa loo adeegsan karaa CEntrance PivotMics PM1. The Neutrik Jaakadaha isku-darka 'Combo' oo leh muuqaalka Hi-Z ayaa u oggolaanaya gelinta tuubbooyinka korantada iyo baasaska, taas oo sidoo kale micnaheedu yahay in MixerFace R4 ay sii labanlaabi karto aaladda barashada muusikada, suufka fikradda, ama ku-da-weynta-gig. MixerFace R4B waxay u rogi kartaa taleefanka casriga aaladda gubanaysa ama DAW la qaadan karo, taasoo kufiican qabashada codka dhawaaqa aqoonyahannada ah meelkastooy joogaan.
Qiimayn loogu talagalay codsiyada idaacadaha iyo raadiyaha, MixerFace-cabbirkiisu baasaboorkiisu xajinayo ayaa fududeynaya in la duubo maqalka tayo-sare leh meel kasta. Makarafoonada cod bixiyayaashu waxay bixiyaan jawaab celin iskucelcelis ah, awood sare oo SPL ah, iyo dhawaq yar, taasoo ka dhigaysa kuwo kufiican labada erey ee hadalka iyo muusikada. Qalabka saxda ah ee ka sameysan kaabsoosha ka sameysan ee kaabayaasha bidix iyo midig waxaa mid walbaa lagu rakibay xagal 4-xagal ah, oo sameysma labo nooc isteerinka 45. Xulasho ahaan, mikrofoonnada waxaa lagu gelin karaa kanaallada ka soo horjeedda ee ka soo horjeedda, oo loo jeedinayaa xagga bannaanka iyo u beddelashada 'MixerFace' qalab waraysi oo dhex socda, oo ku habboon suxufiyiinta iyo cod-bixiyaha waraysanaya martidooda.
Qalabka lagu dhejiyay ee loo yaqaan "X-Button Record" ayaa lagu dhisay 24-bit / 48kHz stereo SD Card wuxuuna bixiyaa maqalka "Hal-Button Record" isla markaana wuxuu maqlaa codka isla markiiba, isagoo aan sugin inuu ku xiro taleefanka gacanta ama kan kiniinka. Waxay daabacdaa nuqul badbaado ah oo isku dhaf ah waxayna u oggolaaneysaa inaad ku dhejiso codka taleefanka iyada oo duubista nuqul maxalli ah kaarka SD, heer dabacsanaan aan la jaanqaadi karin qorayaasha duugga ee jira.
Aaladaha loo yaqaan 'ascod-mountable' ayaa sidoo kale rafcaan u diri doona dadka wax qora ee wax qora qorayaasha iyo sawir-qaadayaasha DSLR. Iyaga oo lagu daray casriga ama kaamerada fiidiyowga, sheygu wuxuu kor uqaadaa tayada maqalka codka caadiga ah ee kamaraka, wuxuu si muuqata u hagaajinayaa qiimayaasha wax soo saarka ee caleemaha fiidyowga xirfadda leh.
Isku-darka 'MixerFace R4B' waxaa hadda laga heli karaa $ 499.99 USD (smallurl.com/MixerFaceR4B). Qalabka cusub ee 'CEntrance PivotMics' sidoo kale wuxuu si gooni gooni ah ugu dirayaa $ 179.99 lammaane.
“Waxaan uga talagalnay duubista duubista xirfadleyaal xoq, sida aan dooneynay inaan u isticmaalno,” ayaa yiri Michael Goodman, Madaxa Shirkadda CEntrance. Aad ayaan u baranay waana ku faraxsanahay sheygan. Macaamiisheena ma niyad jabi doonaan. ”
Ku saabsan qaylada
Ku dhawaad ​​labaatan sano, summadaha ugu caansan adduunka ee Pro Audio iyo Macaamiisha Elektaroonigga ah waxay u leexdeen CEntrance tikniyoolajiyadeeda maqalka ee dhijitaalka ah. Astaamaha aqoonta ee loo yaqaan 'CEntrance know-sida' awooda abaalmarinta gitaarrada gitaarka, duubista baraha internetka, kuwa ku hadla ee caqliga leh, iyo DACs liiska AZ ee magacyada ugu sarreeya, sida Alesis, Harman, McIntosh, iyo Zoom. Maanta, iyada oo ay u hamuun sanyihiin dhawaaqa maqalka ee codka maqalka ah, CEntrance waxay ku raaxeysataa macaamiisha adduunka oo dhan iyada oo leh xariiq hal-abuurnimo ah, alaabooyin abaal-marin ah oo duubista iyo dib-u-ciyaarista. Fannaaniinta duubista caan ah, soosaarayaasha, xirfadleyda codka-weyn ka sarreeya, iyo nashqadeeyayaasha codka ayaa taageeraya xalalka maqalka ee CEntrance. Naga soo booqo at www.centrance.com
MixerFace ™, Isweydaarsiga Diiwaanada Moobaylka ', Jasmine Mic Pre ™, BlueDAC ™ waa calaamadaha ganacsiga CEntrance. Dhammaan calaamadaha Calaamadaha Ganacsiga waa hantida milkiileyaashooda. Dhamaan Xuquuqda Ayaa Leh.
Broadcast Engineer Broadcast Engineering Graham Chapman Prmoted toEditor Spears & Fiilooyinka Video Engineer	2019-11-05
Previous: Bandhiga sawirka Studio Internship
Next: Bal ka fikir Cusboonaysiinta Is-gaadhsiinta Tiknolojiyadda Gawaarida Gaarka ah ee NEP Belgium